ပငျလုံစာခြုပျရဲ့အနှဈသာရကို မမကွေ့ဖို့လိုတယျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 24, 2017 February 22, 2019 kyaw zaw oo
၁။ ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကို ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် မမေ့ကြဖို့လိုပါတယ်။ ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ အနှစ်သာရက ဘာလဲဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားပြည်နယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် ကို ဗဟိုအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာက လာရောက်ထိပါးခြင်း မရှိစေရဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနှစ်သာရကို စကားလုံးအားဖြင့် ပြောရရင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ (၂၄-၀၅-၂၀၁၇) ဒီကနေ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံ (ခေါ်) ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို ကျင်းပရာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကေအန်ယူ အကြီးအကဲ အဘ မူတူးစေးဖော တို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို ဒီနေ့မနက် မိမိ နေအိမ်ကနေ အဝေးရောက် ကြားမြင် ဖတ်ရှုရပါတယ်။
၃။ ဒီအထဲမှာ နှစ်ချက် သတိထားမိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အပြောပါ။ “ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှာ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ စာတမ်း ၇၂ စောင်ကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ အချို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များရဲ့ ဆွေးနွေးချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အခြေခံအယူအဆတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဆိုတဲ့ ဖက်ဒရယ်ကို ကျော်လွန်ပြီး အလွန်အကျွံတောင်းဆိုမှုတွေ ဖြစ်နေတာကိုလည်း သတိထားမိခဲ့တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ “တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်နေခြင်း” ဖြစ်ပြီးတော့ “ဆန့်ကျင်ဖျက်ဆီ်းနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် မိမိတို့ရဲ့ တာဝန်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ သဘောဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေကို တစ်ဆက်တည်း ပြောသွားပါတယ်။
၄။ နောက်တစ်ခု သတိထားမိတာက ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ် လို့ ဆိုကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အပြောပါ။ “ပေါ်ပင်အများကြိုက်မယ့် နည်းတွေရှာပြီးဖိအားပေးတာမျိုး၊ နိုင်ငံရေးအရ အကျပ်ကိုင်တာမျိုး ကျွန်မတို့ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင် ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောသွားပါတယ်။ “အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့” လို့ ဆိုရာမှာ မြန်မာတပ်မတော်က လက်ခံနိုင်ဖို့ရာက လက်တွေ့ အခြေအနေအရ အရေးအကြီးဆုံးဆုံးလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြတဲ့သူတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်ပင်အများကြိုက် မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားအပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်တွေကို လိုက်ရှာအနက်ဖွင့်ကြဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
၅။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှု အခန်းကဏ္ဍ၊ ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့်တက်၊ ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့်မတက်၊ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်လား ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလား၊ အဖွဲ့အလိုက် အခြေအနေအလိုက် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ အတိုးအဆုတ်တွေ . . . စတဲ့ အချက်တွေအပါအ၀င် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးနိုင်မှ ဒီပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ တကယ့်အဖြစ်သနစ်ကို မြင်သာနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီ ဆောင်းပါးငယ်မှာ ဒါတွေကို မဆွေးနွေးတော့ဘဲ၊ အရေးအကြီးဆုံး အနှစ်သာရတစ်ချက်ကိုသာ မမေ့မလျော့ အမြဲ ဆုပ်ကိုင်ရပ်တည်ကြဖို့ကို အစုအဖွဲ့အသီးသီးက မိမိတို့ ရခိုင်ရဲဘော်များအပါအ၀င် အခြားသောတိုင်းရင်းသားရဲဘော် အားလုံးကို ကျွန်တော် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
၆။ ၁၉၄၇-ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ ပင်လုံသဘောတူညီချက်မှာ နိဒါန်း အပိုဒ် တစ်ပိုဒ် နဲ့ အခြားအချက် ကိုးချက်ပါပါတယ်။ အဓိကအရေးကြီးတာက နိဒါန်းစာပိုဒ် နဲ့ အချက်နံပါတ် (၅) ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်နံပါတ် (၅) က ဒီလိုဆိုပါတယ်။
၇။ “(V) Though the Governor’s Executive Council will be augmented as agreed above, it will not operate in respect of the Frontier Areas in any manner which would deprive any portion of these Areas of the autonomy which it now enjoys in internal administration. Full autonomy in internal administration for the Frontier Areas is accepted in principle.”
၈။ အဲသည်အချက်ကို ဗမာလို အကြမ်းဖျင်းဘာသာပြန်ကြည့်ရင် ဒီလို သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ “ဘုရင်ခံရဲ့ အမှုဆောင်ကောင်စီ ကို အထက်ပါ သဘောတူညီချက်တွေအတိုင်း အားဖြည့်ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဘုရင်ခံရဲ့ အမှုဆောင်ကောင်စီ (တနည်း ဗဟိုအစိုးရ)ဟာ နယ်ခြားဒေသများ (တနည်း တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ) နဲ့ပတ်သက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဒီနယ်ခြားဒေသများ လက်ရှိ ရရှိခံစားနေကြရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မဆို စိုးစဉ်းငယ်မှတောင် ထိပါးကာ (ဗဟိုအစိုးရက) အုပ်ချုပ်စေခြင်းမရှိစေရ။ ဒီနယ်ခြားဒေသတွေရဲ့ ပြည်နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည်အ၀သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မူအားဖြင့် လက်ခံသဘောတူကြသည်။”
၉။ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံးဝထိပါးခြင်းမရှိစေရ ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရအားဖြင့် ပင်လုံ ပဋိညာဉ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးသော ဗမာခေါင်းဆောင်များနဲ့ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း ကိုယ်စားလှယ်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုး သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံးဝထိပါးခြင်းမရှိစေရ ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကို ကောင်းစွာ နားလည်ရင် ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်အပ်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဟာ ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကို ကောင်းစွာ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရက မပို့မစို့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ထမင်းတစ်ဆုပ်ရေတစ်မှုတ် ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကလေးတွေ ပေးထားတဲ့ ဘောင်အတွင်းက ပြည်နယ်တွေဟာ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲနိုင်ကြပါပြီလို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာမျိုးဟာ ကျွန်တော်တို့အမွေဆက်ခံထားတဲ့ မူလ ပင်လုံသဘောတူညီချက်နဲ့ ပြောင်းပြန်သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ မူလသဘောတူညီချက်အရဆိုရင် ကြွင်းကျန်အာဏာတွေ အားလုံးဟာ ပြည်နယ်တွေမှာ ရှိရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ ဗဟိုအစိုးရဟာ ပြည်နယ်တွေက ခွဲဝေပေးတဲ့ အာဏာတွေကို ရရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကို ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် မမေ့ကြဖို့လိုပါတယ်။ ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြရာမှာ ကွဲပြားတဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုး မတူညီကြတဲ့ ဖြစ်စဉ်အဆင့်အသီးသီးကို ဖြတ်သန်းနေကြရပေမယ့် ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ ပင်မအနှစ်သာရကို မမေ့လျောကြဖို့နဲ့ မျက်ခြေမပြတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
၁၂။ ပြည်ထောင်စုသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။
၂၀၁၇ မေလ(၂၄) ရက်
၁၅း၀၄ နာရီ
Written by – ကြျောဇောဦး | ၂၀၁၇ မလေ(၂၄) ရကျ
၁။ ပငျလုံစာခြုပျရဲ့အနှဈသာရကို ဘယျအခွအေနရေောကျရောကျ မမကွေ့ဖို့လိုပါတယျ။ ပငျလုံစာခြုပျရဲ့ အနှဈသာရက ဘာလဲဆိုရငျ သကျဆိုငျရာအမြိုးသားပွညျနယျတှရေဲ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျပိုငျခှငျ့ ကို ဗဟိုအစိုးရရဲ့ အုပျခြုပျရေးအာဏာက လာရောကျထိပါးခွငျး မရှိစရေဆိုတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒီအနှဈသာရကို စကားလုံးအားဖွငျ့ ပွောရရငျ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးပိုငျခှငျ့၊ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျ ဖနျတီးခှငျ့ဖွဈပါတယျ။
၂။ (၂၄-၀၅-၂၀၁၇) ဒီကနေ့ ၂၁ ရာစုပငျလုံ (ချေါ) ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ ရဲ့ ဒုတိယအကွိမျ အစညျးအဝေး ပထမနကေို့ ကငျြးပရာမှာ မွနျမာ့တပျမတျော စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့ ကအေနျယူ အကွီးအကဲ အဘ မူတူးစေးဖော တို့ရဲ့ မိနျ့ခှနျးတှကေို ဒီနမေ့နကျ မိမိ နအေိမျကနေ အဝေးရောကျ ကွားမွငျ ဖတျရှုရပါတယျ။
၃။ ဒီအထဲမှာ နှဈခကျြ သတိထားမိပါတယျ။ ပထမတဈခကျြက ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျရဲ့ အပွောပါ။ “ပွီးခဲ့တဲ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံမှာ တငျသှငျးခဲ့တဲ့ စာတမျး ၇၂ စောငျကို လလေ့ာတဲ့အခါမှာ အခြို့တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့မြားရဲ့ ဆှေးနှေးခကျြ၊ လုပျဆောငျခကျြနဲ့ အခွခေံအယူအဆတှဟော ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ ဆိုတဲ့ ဖကျဒရယျကို ကြျောလှနျပွီး အလှနျအကြှံတောငျးဆိုမှုတှေ ဖွဈနတောကိုလညျး သတိထားမိခဲ့တယျ” လို့ သူက ပွောပါတယျ။ ဒါဟာ “တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှရေဲ့ ဆန်ဒနဲ့ အကြိုးစီးပှားကို ဆနျ့ကငျြနခွေငျး” ဖွဈပွီးတော့ “ဆနျ့ကငျြဖကျြဆျီးနတေဲ့ လုပျရပျတှနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှအေပျေါ မိမိတို့ရဲ့ တာဝနျနဲ့အညီ ဆောငျရှကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ” လို့ ခွိမျးခွောကျတဲ့ သဘောဆနျတဲ့ စကားလုံးတှကေို တဈဆကျတညျး ပွောသှားပါတယျ။
၄။ နောကျတဈခု သတိထားမိတာက ငွိမျးခမျြးရေးဗိသုကာ အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျနတေယျ လို့ ဆိုကွတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အပွောပါ။ “ပျေါပငျအမြားကွိုကျမယျ့ နညျးတှရှောပွီးဖိအားပေးတာမြိုး၊ နိုငျငံရေးအရ အကပျြကိုငျတာမြိုး ကြှနျမတို့ လုပျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အားလုံးနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးပွီး အားလုံးလကျခံနိုငျတဲ့ သဘောတူညီခကျြတှရေရှိအောငျ ကွိုးပမျးသှားမှာဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောသှားပါတယျ။ “အားလုံးလကျခံနိုငျတဲ့” လို့ ဆိုရာမှာ မွနျမာတပျမတျောက လကျခံနိုငျဖို့ရာက လကျတှေ့ အခွအေနအေရ အရေးအကွီးဆုံးဆုံးလို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ကွတဲ့သူတှေ ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ပျေါပငျအမြားကွိုကျ မလုပျဘူးဆိုတဲ့ စကားအပါအဝငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျပွောတဲ့ စကားလုံးတှရေဲ့နောကျကှယျမှာ တကယျ့အဓိပ်ပါယျတှကေို လိုကျရှာအနကျဖှငျ့ကွဖို့ မဖွဈမနလေိုအပျပါတယျ။
၅။ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ တရုတျရဲ့ပါဝငျပတျသကျမှု အခနျးကဏ်ဍ၊ ဘယျသူတှကေ ဘာကွောငျ့တကျ၊ ဘယျသူတှကေ ဘာကွောငျ့မတကျ၊ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျလား ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီလား၊ အဖှဲ့အလိုကျ အခွအေနအေလိုကျ ဆောငျရှကျကွတဲ့ အတိုးအဆုတျတှေ . . . စတဲ့ အခကျြတှအေပါအဝငျ အခွားအသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးနိုငျမှ ဒီပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျမှု ဖွဈစဉျကွီးရဲ့ တကယျ့အဖွဈသနဈကို မွငျသာနိုငျမှာ ဖွဈပမေယျ့၊ ဒီ ဆောငျးပါးငယျမှာ ဒါတှကေို မဆှေးနှေးတော့ဘဲ၊ အရေးအကွီးဆုံး အနှဈသာရတဈခကျြကိုသာ မမမေ့လြော့ အမွဲ ဆုပျကိုငျရပျတညျကွဖို့ကို အစုအဖှဲ့အသီးသီးက မိမိတို့ ရခိုငျရဲဘျောမြားအပါအဝငျ အခွားသောတိုငျးရငျးသားရဲဘျော အားလုံးကို ကြှနျတျော နှိုးဆျောတိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
၆။ ၁၉၄၇-ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ အတှငျး သဘောတူလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွတဲ့ ပငျလုံသဘောတူညီခကျြမှာ နိဒါနျး အပိုဒျ တဈပိုဒျ နဲ့ အခွားအခကျြ ကိုးခကျြပါပါတယျ။ အဓိကအရေးကွီးတာက နိဒါနျးစာပိုဒျ နဲ့ အခကျြနံပါတျ (၅) ဖွဈပါတယျ။ အခကျြနံပါတျ (၅) က ဒီလိုဆိုပါတယျ။
၈။ အဲသညျအခကျြကို ဗမာလို အကွမျးဖငျြးဘာသာပွနျကွညျ့ရငျ ဒီလို သဘောပေါကျနိုငျပါတယျ။ “ဘုရငျခံရဲ့ အမှုဆောငျကောငျစီ ကို အထကျပါ သဘောတူညီခကျြတှအေတိုငျး အားဖွညျ့ဖှဲ့စညျးမှာ ဖွဈပမေယျ့၊ ဘုရငျခံရဲ့ အမှုဆောငျကောငျစီ (တနညျး ဗဟိုအစိုးရ)ဟာ နယျခွားဒသေမြား (တနညျး တိုငျးရငျးသားပွညျနယျမြား) နဲ့ပတျသကျဆောငျရှကျတဲ့အခါမှာ ဒီနယျခွားဒသေမြား လကျရှိ ရရှိခံစားနကွေရတဲ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ကို မညျသညျ့နညျးလမျးနှငျ့မဆို စိုးစဉျးငယျမှတောငျ ထိပါးကာ (ဗဟိုအစိုးရက) အုပျခြုပျစခွေငျးမရှိစရေ။ ဒီနယျခွားဒသေတှရေဲ့ ပွညျနယျတှငျးအုပျခြုပျဆောငျရှကျခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ အပွညျအဝသော ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျပိုငျခှငျ့ကို မူအားဖွငျ့ လကျခံသဘောတူကွသညျ။”
၉။ ပွညျနယျတှရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံးဝထိပါးခွငျးမရှိစရေ ဆိုတဲ့ အနှဈသာရအားဖွငျ့ ပငျလုံ ပဋိညာဉျကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဦးစီးသော ဗမာခေါငျးဆောငျမြားနဲ့ ကခငျြ၊ ရှမျး၊ ခငျြး ကိုယျစားလှယျတှေ လကျမှတျရေးထိုး သဘောတူခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
၁၀။ ပွညျနယျတှရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံးဝထိပါးခွငျးမရှိစရေ ဆိုတဲ့ အနှဈသာရကို ကောငျးစှာ နားလညျရငျ ကြှနျတျောတို့ တညျဆောကျအပျသောဖကျဒရယျပွညျထောငျစုဟာ ဘယျလိုမြိုးဆိုတာကို ကောငျးစှာ နားလညျနိုငျပါတယျ။ ဗဟိုအစိုးရက မပို့မစို့ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ ထမငျးတဈဆုပျရတေဈမှုတျ ဆိုငျရာ လုပျပိုငျခှငျ့ကလေးတှေ ပေးထားတဲ့ ဘောငျအတှငျးက ပွညျနယျတှဟော ကိုယျဘာသာကိုယျ ပွညျနယျ ဖှဲ့စညျးပုံ ရေးဆှဲနိုငျကွပါပွီလို့ လုပျပိုငျခှငျ့ပေးတာမြိုးဟာ ကြှနျတျောတို့အမှဆေကျခံထားတဲ့ မူလ ပငျလုံသဘောတူညီခကျြနဲ့ ပွောငျးပွနျသဘော ဖွဈနပေါတယျ။ မူလသဘောတူညီခကျြအရဆိုရငျ ကွှငျးကနျြအာဏာတှေ အားလုံးဟာ ပွညျနယျတှမှော ရှိရမှာ ဖွဈပွီးတော့၊ ဗဟိုအစိုးရဟာ ပွညျနယျတှကေ ခှဲဝပေေးတဲ့ အာဏာတှကေို ရရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၁။ ပငျလုံစာခြုပျရဲ့အနှဈသာရကို ဘယျအခွအေနရေောကျရောကျ မမကွေ့ဖို့လိုပါတယျ။ ရပိုငျခှငျ့တှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျကွရာမှာ ကှဲပွားတဲ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုး မတူညီကွတဲ့ ဖွဈစဉျအဆငျ့အသီးသီးကို ဖွတျသနျးနကွေရပမေယျ့ ပငျလုံစာခြုပျရဲ့ ပငျမအနှဈသာရကို မမလြေ့ောကွဖို့နဲ့ မကျြခွမေပွတျကွဖို့ လိုပါတယျ။
၁၂။ ပွညျထောငျစုသား ညီအဈကိုမောငျနှမမြားအားလုံး ကနျြးမာရှငျလနျးကွပါစေ။
၂၀၁၇ မလေ(၂၄) ရကျ
Previous ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေးထဲက နှားနို့၊ ဝကျ နှငျ့ ခှေး တို့အကွောငျး
Next ဘင်ျဂါလီလူအုပျစုလကျခကျြဖွငျ့ ဟိန်ဒူ ကိုးဆယျကြျော အစုလိုကျအပွုံလိုကျ အသတျခံရမှု ဆိုငျရာ တငျပွခကျြ